FAHATSIAROVANA NY 7 FEBROARY : « Tsy verivery foana ny rà nalatsak’ ireo maherifon’ny tanindrazana »
“Tsy verivery foana ny rà nalatsak’ireo maherifon’ny tanindrazana”, io no hafatra mavesatra avy amin’ny filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina nandritra ny fahatsiarovana ny raharaha 7 febroary, omaly. 8 février 2018
Sivy taona aty aoriana, namela tantara tsy hay kosehina eo amin’ny tantaram-pirenena ny raharahan’ny 7 febroary ary anisany hamela tantara ho an’ny taranaka fara aman-dimby ihany koa. Omaly, nahatsiaro manokana ireo olona namoy ny ainy nandritra ny tolona ho an’ny fanavotam-pirenena tamin’ny taona 2009 ny vahoaka malagasy. Nomarihina izany tamin’ny alalan’ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin’ny tsangambato natao ho fahatsiarovana ireo mahery fo teny Antaninarenina.
Antoko politika maro niaraka tamin’ireo mpiara-dia aminy no nitandahatra nanatanteraka izany nanomboka tamin’ny 7 ora sy sasany maraina. Anisan’ izany ny antoko Monima, ny an’ny Hvm, ny fikambanan’ireo olona niharam-boina na ny AV7 ary ny Mapar miaraka amin’ireo fikambanana tanora Pro-Anr sy Cs-Anr izay miara-dia sy manohana ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina. Ho an’ireto farany manokana dia natomboka tamin’ny fotoam-pivavahana fohy ny fametrahan’izy ireo fehezam-boninkazo ary avy eo narahin’ny fanomezana ny hafatra avy amin’ny filoha mpanorina ny antoko Tgv izay nisoloan’izy ireo tena tamin’io omaly io.
“Miray fo aminareo aho. Tsy verivery foana akory ny rà nalatsak’ ireo maherifon’ny tanindrazana”, hoy ny hafatra avy aminy. Nandritra ny fotoana fohy nanateran’ny teo anivon’ny Mapar ny anjara fehezam-boninkazony, omaly io dia nampisehoan’izy ireo hatrany ny fitiavan-tanindrazana ananan’izy ireo izay anisany indraindrain’ny Filohan’ny tetezamita hatrany. Hita tonga teny an-toerana avokoa na ireo solombavambahoaka na ny loholona sy ireo olom-boafidy tamin’ny vondrona politika Mapar.
“Tsy hanaiky hisian’ny famelan-keloka”
Raha tsiahivina fohy ny tantara dia olona am-polony maro no indray namoy ny ainy lavon’ny bala nandritra ny tifitra variraraka niseho teny Ambohitsorohitra ny andron’ny 7 febroary 2009. Vokatr’izany maro ireo lasa mananotena tsy fidiny, maro ireo lasa kamboty tsy fidiny ary taty aoriana dia nitsangana ny fikambanana Av7 izay ivondronan’ny havana akaikin’ireo olona maty, sy ireo naratra ary nitondra takaitra tamin’iny raharaha iny. Omaly dia anisany tonga maro teny Antaninarenina izy ireo nahatsiaro manokana ireo fianakaviany maty ho an’ny tanindrazana. Manoloana ny fampihavanam-pirenena sy ny famotsoran-keloka izay mandeha amin’izao fotoana izao dia nilaza izy ireo fa tsy “hanaiky izany velively” ary tsy tokony ny olona nahavita nandatsa-drà ireo Malagasy mpiray tanindrazana aminy no mbola hahazo famelan-keloka indray. Nanamafy ihany koa ireo mpikambana ao anatin’ny Av7 fa tsy mivaky velively izy ireo araka ny resaka voizina etsy sy eroa. “Ny fikambanana Av7 aloha voalohany indrindra dia nisy ezaka nanaparitaka fa mivondrona foana izahay fa tsy miparitaka izany hatramin’izao.
Nitolona ireo havanay ireo tamin’ny fitondran- dRavalomanana, izay fitondrana tena nanjakan’ny jadona sy ny fitiavan-tena diso tafahoatra. Ain’olona maro no nafoy tamin’io fotoana io ka tsy tokony hisy mihitsy izany fifamelan-keloka izany eto amin’ity tanin’i Madagasikara ity”, hoy Ralalanirina Eléonor isan’ireo mpikambana ao anatin’ny Av7. Hatrany am-boalohany dia efa ambentin-tenin’izy ireo ny hoe “maso solon’ny maso ary ny aina solon’ny aina”. Omaly, avo ny feon’ireo mpikambana raha nilaza fa tsy tokony hialokaloka ao ambadik’izany fampihavanam-pirenena sy famotsorankeloka ataon’ireo mpitondra ao ambonimbony ao izay olona tompon’antoka tamin’iny raharaha iny.
“Ilay olona namono olona dia tadiavina sarotsaromana fotsiny amin’ny resaka fampihavanam- pirenena. Aleo hitondra ny sazy sahaza azy izy fa tsy misy an’izany fandamindaminan’ireo ao ambony ao izany. Amin’ny maha Malagasy dia sarobidy ny aina, raha amiko dia tsy tokony hisy izay famelan-keloka izay”, hoy i Razafimanjato Chantal namoy ny vadiny tamin’iny raharaha 7 febroary 2017 iny.
Fantatra fa efa nisy ny fitoriana nataon’ireo mpikambana ao anatin’ny Av7 izay nanana ny maty sy niharam-boina tamin’iny raharaha iny. Nilaza omaly i Razana- mahasoa Christine, filoha nasionalin’ny vondrona Mapar fa efa misy raharaham-pitsarana mahakasika ny 7 febroary saingy tsy fantatra hatreto izay niafarany. Tsy fantatra ihany koa, hoy izy, na ity fitondram-panjakana mijoro ankehitriny ity no minia manakana ny fandehanan’izany raharaha izany eny anivon’ny Fitsarana.
FAHATSIAROVANA NY 7 FEBROARY
2018-02-08 07:30:25 par tax boom
Ny tantara tsy fanadino ary ts azo hadinoina ireo namoy ny ainyhoan’ny tanindrazana
2018-02-08 07:49:39 par ANDRIAMARO R. Hery
Tonga ity ny fotoana hamohazana indray ny tolona izay natomboka tamin’ny taona 2009. iaraha-mahalala fa tsy mbola vita ny tolona satria tolona hoamin’ny Fahalalahana, Fiovana.